बाथ रोग के हो ? बाथ रोगको कसरी पहिचान गर्ने? | सुदुरपश्चिम खबर
पछिल्ला वर्ष नेपालमा बाथ रोगबाट पीडित हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यो रोगका विषयमा धेरै जानकारी आम मानिससम्म पुग्न अझसम्म पनि बाँकी नै छ। नसर्ने र दीर्घ रोग प्रकृतिको बाथलाई ‘अटोइम्युन डिजिज’ अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर बनाउने रोगसमेत भनिन्छ। बाथले कुनै एउटा अंगविशेष मात्र नभई शरीरका विभिन्न अंगमा एकैपटक असर गर्न सक्छ। नङ, छाला, जोर्नीदेखि भित्री अंगहरू फोक्सो, नसा, रक्तनलीलगायतलाई बाथ रोगले असर पु¥याउँछ।
बाथ रोग विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। गठिया बाथ, लुपस, ढाडको बाथ, ¥युमाटाइस आरथाइटिस, भास्कुलाइटिस, छाला बाक्लो हुनेलगायतका बाथ रोग बढी देखिने गरेको छ।
शीघ्र पहिचान नै यसबाट बच्ने उपाय हो। बाथ रोग देखिसकेपछि चिकित्सकको सुझावअनुसार औषधि लिन र उपचार गर्न आवश्यक छ। विभिन्न संक्रमणबाट बच्नु र रोगको लक्षण देखापर्ने बित्तिकै उपचारमा जानु बुद्धिमानी हो। यसबाहेक धुम्रपान नगर्ने, तौल नियन्त्रण गर्ने र संक्रमणबाट बच्नुपर्छ। बाथ रोग छ भने बाथ रोग विशेषज्ञलाई नै देखाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। (gnewsnepal बाट सभार)